Linux LTS kernel rutsigiro ichave makore matanhatu | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo isu tave kukwanisa kuziva, kutsigirwa kweLinux kernels ayo ari LTS, ndokuti, "Nguva Yakareba Tsigiro", ivo vanozove nerutsigiro rurefu. Kunyanya, rutsigiro urwu ruchagara kweanenge makore matanhatu kubva mushanduro 6, inozoburitswa munguva pfupi, kunyangwe ichinonoka zvine chekuita neyakafa nguva inotarisirwa (inotarisirwa kuburitswa munaNovember).
Hapana mubvunzo nhau idzi dzinoshamisa, sezvo yakawedzera neatatu rutsigiro rwekare rwaive neshanduro dzeLTS dzeKernel. Parizvino, rutsigiro rwanga rwuri makore maviri, mari iyo kunyangwe yaive yakakwana kune vamwe vashandisi, kune vamwe kwete zvakanyanya.
Chikonzero ichi chaitwa, kugadzikana, Sezvo nenzira iyi, vashandisi vanoda kugona kuchengetedza yakafanana LTS Kernel kwemakore matanhatu akareba, vasina kana kugadzirisa kana kushandura vhezheni kana vasingade. Nekuve nerutsigiro, vanhu vasina kuvandudza, havachave nechokutya kukanganisa kwekuchengetedzeka kana kupererwa neyakagadziriswa, nekuti ichave yakavimbiswa kwemakore matanhatu
Chimwe chikonzero chikuru ine chekuita nemafoni eApple, iyo sekuziva kwako, takura Linux Kernel. Nekuda kwekuparadzaniswa kukuru kweshanduro uye kushomeka kwechido chevagadziri kuti vape rutsigiro kumafoni ekare, mazhinji acho akasiyiwa echinyakare, asina kutsigirwa uye nekudaro kernel shanduro dzinotambura.
Ichi Ichaitwa patent kubva mushanduro 8 ye Android, inozivikanwawo se = Android Oreo. Iyi vhezheni ichave neLTS Kernel inogara kwenguva refu nerutsigiro rwakagadziridzwa kubva kuGoogle, inowanika kumidziyo yese ine iyi vhezheni yeApple.
Nenzira iyi, Kernel 4.14 LTS ichatsigirwa kusvika kupera kwa2023, saka hapana mubvunzo ichava sarudzo yakanakisa kune vashandisi vazhinji. Rangarira kuti 4 kusvika ku6 shanduro nyowani dzeKernel dzinoburitswa pagore, asi imwe chete yadzo ndeyeLTS, saka kugadzirisa kune vhezheni 4.14 LTS kana yagadzikana ichave iri zano rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux LTS kernel rutsigiro ichave makore matanhatu